XOG: 7-Mashruuc oo Sacuudigu Soomaalia ka fulin lahaa oo Xiisada Qatar Darteed loo Hakiyay. – Xeernews24
XOG: 7-Mashruuc oo Sacuudigu Soomaalia ka fulin lahaa oo Xiisada Qatar Darteed loo Hakiyay.
Soomaaliya ayaa la kulmeysa cadaadis nuucyo kala duwan leh tan iyo markii uu bilowday Khilaafka u dhaxeeya Dowladaha Khaliijka, waxay sababi karaan caqabadahan in ay hakad geliyaan hormarka iyo dib u dhiska dalka ka socda.
Dowladda Sacuudiga ayaa dib u dhigtay mashaariic waaweyn oo ay Soomaaliya ka fullin rabtay sababo la xidhiidho mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan Khilaafka dowladaha Khaliijka markii ay sheegtay inay dhex dhexaad ka tahay.
Dowladda Sacuudiga ayaa cadaadis weyn ku saartay Soomaaliya sidii ay xidhiidhka ugu jari laheyd dalka Qatar, waxayna Dowladda Soomaaliya muujisay inaysan diyaar u aheyn xidhiidh loo jaro Dalka Qatar oo dano badan ay kala dhaxeyso.
Dhismaha Garoon Diyaaradeed Caalami ah, kaasoo laga dhisi lahaa Duleedka Muqdisho iyadoo la ogyahay in ay Soomaaliya leedahay garoon cusub oo dawlada Turkigu maal galisay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/Farmajo-wasir.jpg 456 685 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-06-13 11:36:362017-06-13 11:36:36XOG: 7-Mashruuc oo Sacuudigu Soomaalia ka fulin lahaa oo Xiisada Qatar Darteed loo Hakiyay.
Wax Badan ka Ogow Dowlada Qatar iyo Saameynta ay Dunida ku leedahay. Urur goboleedka IGAD oo laba ergey cusub u soo magacawday dalka Soomaaliya iyo...